सम्झना : विदेशमा पीडित भएकाले २७ लाख क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था यसरी भएको थियो
Thu, Feb 22, 2018 | 04:46:46 NST
12:47 PM (6 months ago)
मैले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सम्बन्धी १३ वटा व्यवस्था ‘डिजाइन’ गरेर तयारी अवस्थामा राखेको थिएँ । कुनै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट अचानकै सार्वजनिक गराउने योजना डा. ऋषिराज अधिकारी र मेरो थियो । माघ ११ गते ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी भयो ।
अघिल्लो दिन नै प्रेस सल्लाहकारको सचिवालयमा प्रेसलाई बोलाउन समेत जानकारी गराइसकेको थिएँ । प्रेसलाई जानकारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ज्यूको सम्पर्क शाखा (कन्ट्रोल)बाट पत्रकार सम्मलेन स्थगित गर्नुपर्ने भयो भन्ने जानकारी आयो ।
प्रधानमन्त्री ज्यूले पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघि सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीसँग छलफल गर्न खोज्नु भएको रहेछ । मैले पत्रकार बोलाइसकेको जानकारी ‘कन्ट्रोल’लाई गराएँ । केही समयपछि फेरि प्रधानमन्त्री ज्यूबाट सरोकारवाला मन्त्रीहरुलाई बोलाएर पूर्व तयारी सम्बन्धी छलफल गर्ने भन्ने जानकारी आयो । म त तयार नै थिएँ । बीमा समितिसँग लिखित सुझाव मागेको थिएँ । प्रधानमन्त्री ज्यूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न मसँग पर्याप्त जानकारी र स्रोत थियो ।
अचानक बिहान साढे ११ मा छलफल बोलाइयो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीसँगै परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकासशरण महत, श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङ, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. ऋषि अधिकारी, श्रम सचिव, परराष्ट्र र गृहका उच्च अधिकारी समेत हुनुहुन्थ्यो ।
पहिलाे पटक प्रमका अगाडि 'ब्रिफिङ'
‘ब्रिफिङ’ सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीले आदेश दिनुभयो । डा. ऋषिले ब्रिफिङको विषय मात्रै उठाएर बाँकी विषय बुँदागत रुपमा ब्रिफिङ गर्न मलाई भन्नुभयो । यसअघि मलाई प्रमको अघि कसरी ब्रिफिङ गर्छन भन्ने थाहा थिएन । विषयवस्तु तयार पारेकाले ब्रिफिङको जिम्मेवारी मैले पाएको थिएँ ।
पर्‍यो आपत, प्रधानमन्त्री ज्यूलाई हेर्दै डर लाग्ने । म त मंसिरमा मात्रै त्यहाँ गएको थिएँ । तै पनि प्रधानमन्त्री सामु क्षमता देखाउन पाएको अवसरलाई खेर जान दिइन । ब्रिफिङमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई सर भनेर भनेको याद छ ।
ब्रिफिङ गर्दा प्रस्तावित व्यवस्था किन आवश्यक थियो, त्यो अर्थपूर्ण तरिकाले बुझाउनु पर्ने दवाव हुन्छ । नत्र राम्रो व्यवस्था पनि बुझाइको कमीले खारेज हुने डर रहन्छ । पहिलो बुँदा ब्रिफिङ गरिसके पछि त्यसमा उठेका जिज्ञासाको समाधान पनि मैले नै गर्नुपथ्र्यो । एक पछि अर्को बुँदामा ब्रिफिङ गर्दै जिज्ञासा समाधान गर्दै गएँ । प्रधानमन्त्री ज्यूले ‘राम्रो राम्रो’ भनिरहनु भयो ।
यो व्यवस्था लागु गर्नअघि अध्ययन गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रीकाे तर्क
तेस्रो बुदाँमा भारत जाने कामदारलाई वैदेशिक रोजगारको मान्यता दिँदै फागनु २ गते देखि बीमा र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट कम्तिमा १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बीमा गराउने प्रस्ताव थियो । यसबारे मैले डाटासहित दमदार तरिकाले ब्रिफिङ गरें । प्रधानमन्त्री ज्यूले त राम्रो भन्दै हुनहुन्थ्यो । तर, परराष्ट्र मन्त्रीले यो व्यवस्था लागु गर्नअघि अध्ययन गर्नुपर्ने तर्क दिनुभयो ।
मेरो तर्क थियो बीमाका लागि बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीहरु तयार छन्, कामदार प्रिमियम तिर्न तयार छन् भने हामीले किन रोक्ने । तै पनि मन्त्री मान्नुभएन । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको प्रस्ताव बमोजिम कार्यदल बनाएर दुई महिना भित्र लागु गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन भन्नुभयो ।
तर, कार्यदल बनेन । मैले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानेको भारतको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि तुहियो । देशका मुख्य मुख्य पत्रपत्रिकाहरुले भारत रोजगारीको नयाँ व्यवस्थाका बारेमा प्रशंसा गर्दै सम्पादकीय नै लेखेका थिए ।
अन्य बुँदामा पनि क्रमैसँग ब्रिफिङ गर्दै गएँ । प्रधानमन्त्री ज्यूले गम्भिरतापूर्वक सबै ब्रिफिङ सुन्नुभयो । बीमाले प्रस्तावित समयमै कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिबद्धता गरेर पठाएको पत्रको सक्कलै प्रधानमन्त्रीलाई देखाएँ । उहाँको प्रतिक्रिया थियो, ‘ए गज्जब, बीमाले पनि गर्छु भनेको रहेछ ।’
त्यसैदिन बीमा सम्बन्धीकाे घाेषणा
मैले झण्डै एक घण्टा ब्रिफिङ गरें होला । सबैले तारिफ गर्नुभयो । सबैको सहमति पनि जुट्यो । त्यही दिन (२०७३ माघ ११ गते) ३ बजे प्रधानमन्त्री ज्यूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाको घोषणा गर्नुभयो । घोषणामा आएका सबै कुरा मेरो अध्ययन र सोचको नतिजा थियो ।
मलाई गर्व छ, त्यो सम्बोधनबाट विदेशमा पीडित भएका कामदार र तिनका परिवारले २७ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भयो । घातक रोगको रक्षावरण, करार अवधिमा एक वर्ष थप, विदेशका जेलमा रहेका नागरिकको लागि वकिल राख्ने सबै खर्च सरकारले ब्यहोर्ने, करार अवधिको आधारमा कल्याणकारी कोषमा सहभागिता तथा श्रम स्वीकृतिको म्याद गुज्रेपछि मृत्यु भएका नागरिकले पनि राहत पाउने लगायतका थुप्रै व्यवस्था गरियो ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला सुशील ढुंगानाले वैदेशिक रोजगार विज्ञका रुपमा काम गर्नुभएको थियो ।